Dhallinyaro Soomaali ah oo dil iyo dhac loogu gaystay waddanka Koonfur Afrika. – Radio Daljir
Dhallinyaro Soomaali ah oo dil iyo dhac loogu gaystay waddanka Koonfur Afrika.
Febraayo 4, 2010 12:00 b 0
Attag, Feb 04 ? In muddo ah waxaa isi soo tarayey weerarada, dilal iyo dhaca loo gaysto dadka Soomaalid ah ee ku dhaqan wadan Koonfur Afrika, taasi oo sanadkii ugu danbeeyey sii labo lixaadsatay.
Toddobaadkaan tuulada Attag oo ka mid ah Koonfur Afrika, waxaa lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Axmed Cismaan Koronto oo 25 ahaa, kadib markii 4 nin oo hubaysani ay soo warareen dukaan ay shirko ku ahaayeen maxuubka dhintay iyo labo wiil oo kale oo Soomaali ah.
Dableyda hubaysan ayaa rasaas oodda uga qaaday dukaanka oo furnaa ayna ku dhaxjireen 3-da wiil ee lahaa ee Soomaalida ah, kuwaasi oo midkood uu geeriyooday halka labadii kalana ay rabbiineeyeen kadibna ay ka qaateen dhammaan wixi hanti ahaa ee ay haysteen.
Mid ka mid ah wiilashii lahaa dukaanka la weeraray kana badbaaday weerarka burbadda oo lagu magacaabo Axmed Rooble Dhoorre una warramay idaacadda VOA-da laaanteed Af-Soomaaliga, ayaa sheegay dhammaanba hantidii ay haysteen in laga dhacay haatanna ay fara bannaanyihiin.
Wiilkaasi waxaa uu sheegay xilligii weererku dhacay in ay la hadleen bileyska si burcadda looga badbaadiyo, hase ahaatee ma jirin wax gurbad ah oo ay ka heleen bileyska, mana jirto sidoo kale wax dabagal ah oo lagu baadi goobay burcadda falkaasi weerer gaysatay.
Tuulada uu falkaan dhacay ayaa ah mid aysan ku degganayn wax Soomaali ah marka laga reebo saddex daas wiil oo muddo lix bilood ah dukaanku halkaasi uga furnaa, waxaana haatan labada wiil ee ka badbaaday weerarkaasi ay sheegeen in ay go?aansadeen in ay ka cararaan dalka Koonfur Afrika oo ay aadaan meelo kale, maadaama naf iyo maaltoona ugu badbaadayn.
Muddooyinkaan danbe waxaa soo xoogaysanayey ugaarsiga iyo weerarada naftooda iyo maalmood lagu hayo dadka Soomaalida ah ee ka ganacsada wadanka Koonfur Afrika, waxaana sanadkasta lagu dilaa tobanaan Soomaaliya iyadoo sidoo kalana ka dhaco wixii hanti ah ee ay haysteen, mana jirto wax tallaabo ah oo dawladda Koonfur Afrika ay ka qaaday burcadda caadaysatay dilka iyo dhaca dadka Soomaalida ah.
Mudaaharaad rabshado wata oo ka dhacay magaalada Laascaanood, sababayna dhimasho iyo dhaawac dad rayad ah.
Dab xoogan oo qabsaday mid ka mid ah kaamamka qaxootiga ee magaalada Buuhoodle, gobolka Cayn.